Na-akọwapụta ihe, onye na-eme ka ihe dịwanye nkọ - BGT
Tianjin Best Nweta Science & Technology Co., Ltd. (China BGT) bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmahịa nke na-arụ ma na-ebupụ ma na-ebupụ kemịkalụ teknụzụ dị elu. China BGT e guzobere n'afọ 2000. Isi ngwaahịa ndị dị iche iche na-akọwapụta gị n'ụlọnga, ọzọ nucleating gị n'ụlọnga na nwekwara maka egweri plastic nke e exported ọtụtụ mba nke South East Asia, Middle East na Europe ihe fọrọ nke nta ka afọ 20 na ezi ma kwụsie ike.
ele ihe kpọtụrụ anyị
anyị ikpe ọmụmụ show
Enwere ike iji ihe na-eme ka nghọta doo anya ma mee ka mgbochi polypropylene dịwanye elu site na njikọta nke polymer. Nke a na - edugakwa na nkwesi ike nke akụkụ a kpụrụ akpụ na obere oge okirikiri n'oge usoro ịkpụzi. Kinddị ngwaahịa a nke usoro nhazi dị otú a ka akwadoro site na FDA nwere ike iji kọntaktị nri na ahịa ụwa.
Site na iji Onye na-eme ihe na-emepụta Nucleating, ọtụtụ njirimara nke ngwaahịa a nwere ike ịka mma, gụnyere nkwụsi ike nke ihe ahụ, na-enye ike na esemokwu, ike nke mmetụta, mgbanwe mgbanwe, ọnọdụ okpomọkụ nke ikpo ọkụ kpo oku, nkwụsi ike. O nwekwara ike meziwanye ngwa anya na arụmọrụ nke ngwaahịa. Ọ bụ ọcha ọcha ntụ ntụ na-abụghị isi.
The uzo nna ukwu ogbe adabara ezughị ezu crystal resin nke eyi & Pee wdg O nwere ike welie ngwaahịa 'nghọta na elu fineness, ike ọdụdọ, rigidity, okpomọkụ distortion okpomọkụ na size kwụsie ike, belata shaping okirikiri. Ọ na-tumadi etinyere na mgbanwe nke eyi plastic-injection ngwaahịa na imewe nke eyi, Pee elu ìhè transmittance mkpa film, eg nri, ntecha mbukota ihe, ọgwụ akpa wdg
Ngwaahịa anyị na-ekwe nkwa mma
Na-akpa ike Nucleator
Polyester & Naịlọn Nucleator
Ọganihu oru ngo
E zigara ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na Europe.
Ngwa BGT bụ ngwaahịa teknụzụ dị elu, nwere nkọwa dị elu, ndị na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi.
Mgbe ọ bụla anyị nwere ọkachamara technicians-aza ajụjụ gị.
Anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Ozi anyị kachasị ọhụrụ
Dibenzylidene Sorbitol Transparent Nucleating Onye Ọrụ
Enwere ike ịkekọrịta Dibenzylidene sorbitol Transparent Nucleating Agent na ụdị atọ. Oge mbu bu DBS. Ngwaahịa a nwere ogo dị omimi na nke siri ike uto aldehyde. Ka ọ dị ugbu a, n'ihi ebe agbaze ya dị ala ...
Gịnị bụ Pilot Nucleating Ukwu
A na-ekewa ndị na-ahụkarị ihe na-agbanwe agbanwe na ụzọ abụọ: ogige ndị na-emepụta ihe na ogige inorganic. Inorganic Nucleating Agents bụ tumadi oxides nke ọla, dị ka talc, silica, titanium dioxide, benzoic acid na na ...
N'ihi na nke elu okpomọkụ na-eguzogide, ìhè kpọmkwem nnukwu mpo, mfe nhazi na n'ịkpụzi, mfe imegharị ihe maka iji, na ala price, polypropylene e ọtụtụ-eji chemical ụlọ ọrụ, chemical eriri, n'ụlọ ngwa ọrụ, nkwakọ, ọkụ ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ọrụ. Lee ...
Belata Haze ma bulie nghọta nke Polypropylene
Enwere ike iji kọwaa onye na-eme ka nghọta doo anya ma mee ka nghọta nke polypropylene dịwanye elu site na njikọta nke polymer. Nke a na - edugakwa na nkwesi ike nke akụkụ a kpụrụ akpụ na obere oge okirikiri n'oge usoro ịkpụzi ....
Na-eche Gị na Shenzhen 2021!
Chinaplas bụ otu n'ime ihe ngosi kachasị mma n'ụwa nke roba na plastik nke ndị ọbịa ọ bụla na onye ngosi nọ ebe ahụ ji kpọrọ ihe. N'afọ gara aga, n'oge ngosi ahụ, onye ọ bụla nọgidere na-anụ ọkụ n'obi nke ọ bụla ...